Gravity Ny Firavaka Vita - Famolavolana
Ny Firavaka Vita
Ny Firavaka Vita Na dia tamin'ny taonjato faha-21 aza, ny fampiasana teknolojia avo lenta ankehitriny, ny fitaovana vaovao na ny endriny vaovao dia matetika dia tsy maintsy manao fanavaozana, ny Gravity dia manaporofo ny mifanohitra amin'izany. Gravity dia fitambarana firavaka azo zahana amin'ny alàlan'ny kofehy fotsiny, teknika tena taloha ary ny gravity, loharanon-karena tsy afa-manoatra. Ny famoriam-bola dia ahitana singa maro volafotsy na volamena, misy endrika maroloko. Ny tsirairay amin'izy ireo dia mety ho mifandray amin'ny perla na vato fatorana sy pendant. Ny fanangonam-bokatra dia manambara fa tsy manam-petra firavaka isan-karazany.
Anaran'ny tetikasa : Gravity, Anaran'ny mpamorona : Anne Dumont, Anaran'ny mpanjifa : Anne Dumont.
Ny Firavaka Vita Anne Dumont Gravity